Hordhac: PSG Vs Manchester City Kulankooda Champions league-ga Guruub-ka A, Ilkay Gündogan iyo Xidigaha kale ee maqan | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Hordhac: PSG Vs Manchester City Kulankooda Champions league-ga Guruub-ka A, Ilkay Gündogan...
Hordhac: PSG Vs Manchester City Kulankooda Champions league-ga Guruub-ka A, Ilkay Gündogan iyo Xidigaha kale ee maqan
Ciyaartii labaad ee adag oo Manchester City ciyaarto toddobaadka ayaa ka dhici doonta Parc des Princes iyadoo Paris Saint-Germain ay ka aargoosaneyso Group-ka Champions League Group A.
Labada kooxood ayaa soo cusbooneysiiyay colaad kadib markii ay isku dhaceen semi-finalka xilli ciyaareedkii hore, halkaasoo wiilasha Pep Guardiola ay sheegteen labo guul si ay u soo afjaraan riyadii reer Yurub ee Parisiens hal sano oo kale.
PSG: Idrissa Gueye ayaa seegay kulankii ay barbaraha 1-1 la galeen Club Bruges, xidigan ayaa diyaar kaddib ganaax uu ku maqnaa, laakiin Angel Di Maria ayaa ganaax ku maqan.
Leo Messi iyo Marco Verratti ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan kooxda ciyaarta laakiin ma cadda inay taam u noqon doonaan inay ku soo bilowdaan.
Sergio Ramos ayaa ka maqnaa PSG, si kastaba Layvin Kurzawa, Colin Dagba iyo Juan Bernat ayaa dhamaantood ku soo laabtay tababarka.
Gianluigi Donnarumma ayaa lagu wadaa in loo dhiibo booska Keylor Navas.
Manchester City: Aymeric Laporte, Rodri iyo John Stones ayaa dhamaantood taam u ahaa kulankii ay 1-0 kaga badiyeen Chelsea Sabtidii, iyadoo labada ciyaaryahan ee hore ay ku soo bilowdeen Stamford Bridge.
Stones ayaa imaan kara kulankiisii ​​ugu horreeyay ee City xilli ciyaareedkan isagoo beddeli doona Laporte marka loo eego qaab ciyaareedkooda adag.
Ilkay Gundogan ayaa dhaawac ku maqan ilaa fasaxa xulalka kadib.
Paris Saint-Germain iyo Manchester City ayaa kulmi doona markii lixaad ee kulankan, halka kooxda reer France ay wali raadineyso guusheedii ugu horeysay ee kulankan (bar-baro 2 guul daro 3). Kaliya Juventus oo (8 kulan ah) ayay Paris Saint-Germain la dheeshay kulamo badan tartamada yurub iyadoon guuleysan.
Paris Saint-Germain ayaa ku guuldarreysatay inay shabaqeeda ilaashato dhammaan afartii kulan ee ay la ciyaartay Manchester City tartanka UEFA Champions League.
Marka lagu daro laba guuldarro oo Manchester City ka soo gaartay UEFA Champions League xilli ciyaareedkii hore, Paris Saint-Germain ayaa laga badiyay afar ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxaha Ingariiska tartanka ( badin 1).
Xaqiiqdii, kooxda Faransiiska ayaa laga badiyay mid kasta oo ka mid ah seddexdii kulan ee ugu dambeysay markii ay martigelinayeen kooxaha ka soo horjeedda Ingiriiska (v Manchester United sannadihii 2019 iyo 2020, v Manchester City 2021).
Garoonka Parc des Princes
Previous articleGalmudug oo soo saartay digniin ku socota Sheekh Shaakir iyo Macallin Maxamuud
Next articleWar cusub oo kasoo baxay gudiga maamulka doorashada xildhibaanada G/Waqooyi